TAIN-TSIGARA ANADIOVANA SOLOMASO
Manahirana ireo olona mampiasa solomaso matetika ny fisian’ny kiaka amin’ny veran-tsolomaso. Manelingelina ny fahitana izy io ary mazàna tsy mety afaka arakaraka ny karazan’ilay vera. Tsy voatery ihany koa anefa hisafidy ireny karazana vera lafo vidy ireny ny olona manao solomaso. Azo atao tsara ny mampiasa ny tain-tsigara amin’ny fanadiovana sy fanalana ireny kiaka ireny. Raisina ny vovon-dandihazo madio dia asiana ilay tain-tsigara. Iny avy eo no ikosehana moramora ilay veran-tsolomaso. Rehefa vita izany dia tsara raha kobanina anatin’ny rano madio misy savony ilay solomaso ary arahina fanadiovana tsara. Andramo fa ho hitanao fa hiala ilay kiaka.
Etsy hifanoro, Mpanoratra Rijakely, 29.06.2012, 09:38	FIARAHAMONINA